कहाँ खेल्नु ? कहाँ कुद्नु ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
wagle.samjhana@gmail.com प्रकाशित : असार १०, २०७६ ०७:४९
एउटै तहको माथिल्लो कक्षामा जाने सवालमा किन विभेद गर्नु ? यो र त्यो ग्रेडका नाउँमा तिनीहरूलाई विषय तोकिदिएर एउटा सीमारेखामा किन बाँध्नु ? एकातिर ए प्लस र ए को भारी बोकाएर केही विद्यार्थीलाई गाह्रा मानिएका विषय पढ्न बाध्य पार्नु, अर्कातिर तलका ग्रेड ल्याउनेलाई ठूला विषय पढ्ने चाहना हुँदा पनि रोक्नु त्यति राम्रो होइन कि ? कतै हामी धेरै अङ्क ल्याउने र नल्याउने दुवै थरी विद्यार्थीको सपना दुर्घटित बनाउँदै त छैनौँ ? यसतर्फ नेपाली शिक्षा जगत्ले पुनर्विचार गर्ने हो कि ?